के हो मकर मेलाको इतिहास ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
के हो मकर मेलाको इतिहास ?
सूर्य मकर राशिमा रहेका बखत अर्थात् प्रत्येक १२ वर्षमा पनौती (काठमाडौंबाट करिब ३० कि.मि. पर पर्ने बनेपा सहरको दक्षिणतिर रहेको सहर)मा मकर मेला लाग्छ । लिच्छविकालीन राजा मानदेवको पालादेखि नै सुरु भएको अनुमान रहेको यो मेलामा असङ्ख्य भक्तजनको जमघट रहँदै आएको ऐतिहासिक प्रमाण छ तर पनौती मेलाको चर्चा स्कन्द पुराणमै पनि भेटिनु र लक्ष्मणलाई बचाउन हनुमानले ल्याएको बुटी यहीँ खसेको थियो भन्ने चर्चा पाइनुले त्योभन्दा पनि अघिदेखि चल्दै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पनौती क्षेत्र आफैँमा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हो ।
रोशी नदीको जल हत्केलामा राखी गुरू गोरखनाथमा अर्पण गरे मानिसको इच्छासिद्धि हुने विश्वास रहेको छ । नजिकै रहेकी पुण्यमती नदीमा प्रदूषण रहेकाले मेला भरि रोशीबाट विशेष जल प्रवाह गराइने कुरा मेला आयोजक समितिबाट थाहा भएको छ । मकर मेला, त्रिवेणीस्नानले शरीर र मन दुवैको रोग नाश हुन्छ भन्ने पौराणिक कथनअनुसार सत्ययुगमा देवताका राजाले आफ्नो शरीरमा लागेको श्राप जन्य रोग पनौती उपासनाबाटै निको पारेका थिए भन्ने भनाई रहेको छ ।
स्कन्दपुराणको हिमवत् खण्डमा पनि यस प्रसगंमा–गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्यासँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने इन्द्रको समेत श्रापमोचन पद्मावती (पुण्यमाता) र लीलावती (रोशी)को सङ्गममा पूणिर्माका दिन बिहान सबेरै नुहाउनाले भयो भनी उल्लेख छ । नेपाल माहात्म्यमा पुण्यमातालाई नीरमती र रोशीलाई रोषमती भनिएको देखिन्छ । त्यसैले पनौतीमा पुण्यमाता र रोशीको सङ्गममा स्नान गर्नाले पाप पखालिन्छ भन्ने जनविश्वास छ ।
परापूर्वकालमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माले अहिल्या नाम गरेकी अति सुन्दरी स्त्री सृष्टि गरी गौतम ऋषिलाई नासोका रूपमा राख्न दिए । यो रहस्य ब्रह्माजी र ऋषिमा मात्र सीमित थियो भने अरूले अहिल्यालाई गौतम ऋषिकी धर्मपत्नी सम्झिए पनि ऋषिले कुनै वास्ता गरेका थिएनन् । उनले अहिल्यालाई नासोका रूपमै सुरक्षित राखे । एकदिन स्वर्गका राजा देवराज इन्द्र सिकार गर्न जाँदा अहिल्यालाई देखि मोहित भए ।
गौतम ऋषि स्नान गर्न गएको मौका पारी गौतम ऋषिको भेष धारण गरी अहिल्यालाई छक्याई उनीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखे । स्नानबाट फर्किएका गौतम ऋषिले सो कुरा थाहा पाई इन्द्रलाई शरीरमा हजारौं योनी उत्पन्न हुने श्राप दिए । इन्द्र विरूपी भए, उनकी पत्नी शचीसमेतलाई आपत् पर्‍यो ।
आफ्ना पतिको यस्तो रूप देखेर विह्वल भएकी इन्द्राणीले आफ्ना गुरू वृहस्पतिका सामु यो श्राप कसरी हटाउने भनी बिन्ती चढाउँदा ब्रह्माजीको आज्ञा लिएर तिमी र इन्द्रले कुञ्जपर्वत –हालको गोरखनाथ डाँडा)को फेदीमा लीलावती र पद्मावतीको सङ्गममा जहाँ सुकेको बाँस गाड्दा टुसाएर आउँछ त्यहाँ प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल पूणिर्माका दिन स्नान गरी १२ वर्षसम्म महादेवको तपस्या गरे यो श्रापबाट मुक्त मिल्ने सल्लाह पाए ।
गुरू वृहस्पतिको उपदेशले पनौतीको गोरखनाथ पर्वत नजीकै पुण्यवती(पद्मावती) र लीलावती खोलाको सङ्गममा इन्द्रले शिवको र शचीले पार्वतीको १२ वर्षसम्म तप गरे । तपका प्रभावले पार्वती पुण्यवती रूपमा प्रस्तुत भई रोशी खोलाको सङ्गममा झरेपछि स्वयं शिवजी प्रकट भइ शिवलिङ्गको उत्पत्ति भयो । त्यही शिवलिङ्गबाट महादेव प्रकट भै इन्द्रलाई भने–’यहाँ इन्द्राणीले तपस्या गरी रुद्रावती नदीको उत्पत्ति भएकाले यो ठाउँको नाम शची तीर्थ रहन गएको हो । यो शची तीर्थमा नुहाएपछि निधारमा रहेको योनिबाहेक अरू सबै योनी तिम्रो शरीरबाट लुप्त हुनेछन् ।
यो शिवलिङ्ग नामले इन्द्रेश्वर भनी प्रसिद्ध हुनेछ र यसले मानिसहरूलाई इच्छानुसार फल दिनेछ । त्यसपछि महादेवले भनेअनुसार इन्द्रले इन्द्रेश्वर महादेवको बारम्बार परिक्रमा गरी ज्येष्ठ शुक्ल पूणिर्माका दिन शची तीर्थमा नुहाए। यसरी इन्द्रको शरीरबाट श्राप चिन्हहरू हटे । हिजोआज पनि इन्द्रेश्वर शिवको दर्शन गर्नाले कामुकताको दोष हट्ने विश्वास छ । १२ वर्षमा मेला लाग्ने कारण पनि यही हो ।
इन्द्राणीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर माघ महिनाको पुण्य घडीमा रुद्रावती नदीको रूप लिई पार्वती त्यहाँ गुप्तरूपले बग्न थालिन् । दिव्यचक्षुले इन्द्राणीले रुद्रावती नदी बगेको दे खिन् । पनौतीका बासिन्दाहरू प्रयागमा गङ्गा र यमुनाको सङ्गममा गुप्त रूपले सरस्वती मिसिन आएझैं यहाँ पनि पुण्यमाता र रोशीको सङ्गममा गुप्त रूपले रुद्रावती मिसिन आएकी छिन् भन्ने विश्वास गर्छन् । त्यसैले पनौतीघाटलाई उत्तरप्रयाग नामले पनि चिनिन्छ ।
त्यसैगरी धेरै वर्षअघि पनौती र पाटनमा लामो समयसम्म वर्षा नभई खडेरी परेकाले पनौतीका राजा दिर्गरथ र काठमाडौंका राजा सत्यवर फूलचोकी माईको दर्शन र पानी वरदान माग्न गए । खडेरीबाट मुक्त हुन सुन र चाँदीको फूल चढाउन ल्याउनू भन्ने आदेश दुवै देशका राजालाई फूलचोकी माईले सपनामा दिइन् ।
ललितकलाका धनी काठमाडौंका राजा आफ्नो देशमा प्रशस्त कालिगढहरू हुनाले खुसी भए तर कालिगडहरूको अभावले चिन्तित पनौतीका राजाले मन्त्री, भाइ–भारदारहरूको सल्लाहअनुसार सुन र चाँदीको फूलको सट्टामा क्रमशः तोरी र मुलाको फूल फूलचोकी माईलाई चढाएछन् । कालिगढहरूको अभावका कारण साँच्चिकै फूल प्रस्तुत गर्नुपरेको बिन्ती चढाएपछि फूलचोकी माई प्रसन्न भएर रुद्रावती (रोशी) नदीमा पानी पठाइदिइन ।
केही समयपछि काठमाडौंका राजा साँच्चिकै सुन र चाँदीको फूल लिएर जाँदा पनौतीमा नदी पठाइसकेको कुरा थाहा पाए । उनले आफूलाई पनि वरदान मिल्नुपर्ने प्रार्थना गरे । त्यसपछि फूलचोकी माईले आधा नदी त्यसतर्फ पठाइदिन्, जुन नदी गोदावरीका नामले चिनिन्छ । त्यसो भएर पनौती त्रिवेणी र गोदावरीमा ६–६ वर्षको अन्तरमा गोदावरीमा श्रावण महिनाभरि र पनौतीको त्रिवेणीघाटमा माघ महिनाभर १२ वर्षे मेला लाग्छ ।
नब्बे सालको महाभूकम्पबाट पनि कुनै क्षति नभएको पनौतीलाई बासुकी नागले सुरक्षित गराएका छन् भन्ने विश्वास छ । पाँच दर्जनभन्दा बढी मठ, मन्दिरहरू रहेको ऐतिहािसक पनौती क्षेत्रमा ढिकी कुट्ने चलन पहिलेदेखि नै छैन । भक्तहरूले पनौतीघाटमा स्नान गरेपछि वासुकी, ब्रहृमायणी, घनञ्जय र इन्द्रेश्वर शिवको पूजा गर्ने गर्छन् । यसो गर्दा ठूलो पुण्य मिल्ने शास्त्रकारहरूको कथन छ । अघिल्लोपटक(बि.स् २०५४ ) करिब ५० लाखले सहभागिता जनाएको यस मेलामा यसपटक भने कोरोना महामारीको कारणले मेला बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २७ पुस २०७८, मंगलबार ७ : ४७ बजे